आज राती१२ बजे देखि बिर्तामोडमा लकडाउन खुल्ने। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
आज राती१२ बजे देखि बिर्तामोडमा लकडाउन खुल्ने।
रेडियो झापा 100.7 MHz. आइतबार, साउन २५, २०७७ २२:२३:४७
२५,साउन,बिर्तामोड/बिर्तामोड नगरपाकिलाले लकडाउन खुला गरेको घोषणा गरेको छ । साउन १८ गते राती १२ बजेदेखि लागु गरेको लकडाउन आज राती १२ बजे देखि खुल्ला गर्ने निर्णया गरेको बिर्तामोडका मेयर धुर्ब कुमार शिवाकोटीले जानकारी दिए ।